पछि पछि लागेर अघि पुग्दै पदम - ConfuseNepal
July 31, 2019 July 31, 2019 Sanjaya Rai0Comments
कला-कर्ममा लाग्नेहरूका निम्ति आधारभूत शर्तहरू के के होलान् ? पहिलो, प्राकृतिक क्षमता वा जन्मजात गुण र दोस्रो, लगन, मेहेनत वा समर्पण । माथिको प्रश्नमा आउने सामान्यतया : जवाफ यिनै होलान् । त्यसो हो भने, कला-कर्मका जुनसुकै बिधामा लाग्नका लागि यी दुई विशेषता प्रायः अनिवार्य छ । र, यी दुई विशेषताको जगमा उभिएको कलाकार राम्रो कलाकार हुन् ।
यद्यपि सबै राम्रा कलाकारहरू जन-मानसमा चर्चित् हुन्छ्न् भन्ने कुनै सुनिश्चितता छैन । यो निक्कै हैरान लाग्दो पाटो हो । कलाकारहरूले आफ्नो कर्मलाई सामयिक बनाउन नसक्दा यस्तो हुन्छ, सायद । अझ अहिले प्रायोजित समुहको “प्रोजेक्टेड” हिस्सा बन्न नसक्दा यस्तो हुने गरेको सुन्न पाईन्छ ।
राम्रा भएर पनि धेरै कलाकारहरू छाँयामा छन् । चर्चा बाहिर छन् ।
यस्तै छाँयामा रहेका धेरै कलाकारहरूमध्ये पदम राई एक हुन् । कला-कर्मले उनी गायक हुन् । राम्रो गीत गाउँछन् तर चर्चादेखि कोसौं टाढा छन् । झण्डै एकदसकदेखि यस क्षेत्रमा उनी अनवरत लागीपरेका छन् ।
उनले “फूल टिपेँ …..” र “तिमीलाई देखेपछी……” जस्ता, स्रोताहरूबाट निक्कै प्रशंसा बटुल्न सफल गीतहरू बजारमा ल्याईसकेका छन् । यसबीच ताप्लेजुङ आईडलको उपाधी समेत जितेका उनले करिब तीन दर्जन गीतमा आफ्नो आवाज दिन भ्याईसकेका छन् । तापनि यस क्षेत्रमा उनी अझै एक संघर्षरत: कलाकारकै अवस्थामा छन् ।
त्यसो त उनलाई कुनै हतारो पनि लाग्दैन । कुनै अत्यासले पनि छुँदैन । संगीतप्रतिको समर्पण भाव पदममा यति छ कि उनले जस्तोसुकै अप्ठ्याराहरू पनि संगीतको नाममा सजिलै पचाईदिन सक्छ्न् । नत्र यौटा संघर्षरत् कलाकार, कसरी हरबखत ओंठमा मुस्कान च्यापेर रहन सक्छ ? हो, पदम यस्तै छन् । उनी जहाँ भेटिन्छ्न् जहिल्यै भेटिन्छ्न् हँसिलो मुहारमै भेटिन्छ्न् ।
यो हँसिलो मुहार कहिले काठमाडौंका भव्य स्टुडियोहरूमा गीत गाईरहेको देख्न पाईन्छ भने कहिले धरानका चोकहरूमा स्रोताहरूलाई मन्त्रमुग्ध पारिरहेको भेटिन्छ । र, कहिले आफू जन्मे हुर्केको कञ्चनजंघाको काखतिर आफन्तहरूलाई गीत सुनाईरहेको खबर आउँछ भने कहिले प्रवाशमा बस्ने नेपालीहरूलाई नचाईरहेको हेर्न पाइन्छ । उही मुद्रामा । उही सैलीमा । न कुनै अहम् न कुनै छलकपट । ठीक उही कञ्चनजंघा जस्तै कञ्चन ! उनै गायक पदम राईले हालसालै यौटा नयाँ गीत, भिडियो सहित सार्बजनिक गरेका छन् । अहिलेका चर्चित् गायिका मेलिना राईले समेत उनलाई गाउन साथ दिएको उक्त गीत दिनानुदिन लोकप्रियताको शिखर चढ्ने क्रममा छ ।
लोक लयमा अधारित गीतहरू अहिले प्रायः चल्तीका गीतहरू हुन् । संगीतकार दीपक शर्माले यही स्वादमा गीत निर्माण गरेका छन् । शर्मा अहिले निक्कै चर्चित् र सम्भावना बोकेको संगीतकारको रुपमा लिईन्छ्न् । यो गीतले पनि उनी राम्रा संगीतकार हुन् भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ । गीत मीठो र असरदार बनेको छ । शर्माले स्रोताहरूले उनीप्रति गर्ने आशा भरोसालाई मर्न दिएका छैनन् । बरु थप माथि उकालेका छन् । यस गीतको शब्द समेत संगीतकार शर्माकै रहेको छ ।
गीतको संगीत संयोजन अर्थात् एरेन्ज सुनुँ सुनुँ लाग्ने खालको बनेको छ । सुनेपछि नाचुँ नाचुँ लाग्दो छ । लोक लयमा आधारित गीतमा पनि रिकेश गुरुङले आफ्नो दक्षता प्रदर्शन गरेका छन् । उनी अहिले सबैको पहिलो रोजाईको एरेन्जर किन हुन् ? भन्ने सवालको जवाफ यो गीतले दिएको छ ।
पदम राम्रो गायक हुँदै हुन् । मेलिना राईसँगको मेल कहीँ अनौठो सुनिन्न । बीसकै हाराहारीमा गाएका छन् ।
गीतलाई सुब्रतराज आचार्यले सुन्दर ढंगले पर्दामा उतारेका छन् । यतिबेलाका नेपाली चलचित्रमा सुन्दर नायक र सुन्दरी नायिकाको रूपमा ख्याती कमाएका पुष्पल खड्का र वर्षा राउतलाई उनले नचाएका छन् । यो भिडियोको थप सुन्दर पक्ष हो ।
गायक गायिका आफ्नो गीतमा देखिनै पर्ने प्रचलन बनेको छ । सन्दर्भ आओस्/नओस् कथाले मागोस्/नमागोस् फ्याट्टै दृश्यमा “इन्ट्री” मार्दछ्न् । यसले गर्दा एकाग्र भएर गीतको भावमा बगिरहेको दर्शकहरूको ध्यान भंग हुने गर्दछ । लाग्दछ, यो दर्शकहरूमाथिको निर्मम अत्याचार हो । तर गायक गायिकाहरूले यसप्रति आँखा चिम्लीदिएपछि कसको के लाग्छ र ! थिति झन गड्दै गएको छ ।
यस्तो चलन-मोहले पदम र मेलिनालाई कहाँ छाड्थ्यो र, उनीहरू बेला बेला नाँच्दै गरेको गीतमा देख्न मिल्छ । धन्न डाइरेक्टर चलाख परेछन् र ती दृश्यहरू उति अपाच्य लाग्दैनन् । ग्राह्य नै छन् । तथापि नदेखिएको भए उत्तम हुँदै हो ।
गम्भीर बिष्टको सुन्दर कोरियोग्राफी र नवराज उप्रेतीको सन्तोसजनक क्यामेरा चलाई रहेको यस गीतलाई दर्शकहरूले एक महिनाभित्र करिब १८ लाख पटक हेरी भ्याएका छन् । गीत मेलिना राईको अफिसियल यूट्युव च्यानलमार्फत् रिलिज भएको छ ।
← शक्तिशाली कथावस्तुले बाँधिएकाे चलचित्र हाे साइनाे – मिरूना मगर
तीज माईती मेलामा स्वस्तिमा र निश्चललाई आदर्श जोडी सम्मान →
बहराइनमा पहिलो पटक ‘हिमाली फ्युजन’ लाइ…
म्यानचेस्टर आर्सनल बराबरी